Beesha Habargidir: Naceybka -takoorka iyo isku dirka Madaxweyne Xasan waa ka jawaabi doonaa? Akhri fariin ku socota Abgaal . | Habargidir Community
Beesha Habargidir: Naceybka -takoorka iyo isku dirka Madaxweyne Xasan waa ka jawaabi doonaa? Akhri fariin ku socota Abgaal .
Feb 14, 2015 - 17 Jawaabood
Beesha Habargidir waxeey mudo dheer dulqaad u yeelatay tilaabooyin guracan oo Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud kula kacay beesha Habargidir .
1-Beesha Habargidir waxeey ka aamustay tagrifal iyo xaqiraad Madaxweyne Xasan ku sameeyay saamiga Beesha ku laheyd awood qeybsiga Dowladda Somalia.
2-Beesha Habargidir waxeey ka aamustay tacadiyadii lagula kacay Odayaashii beesha Habargidir ee Xasan Dahir Aweys ka kaxeeyay Cadaado
3-Beesha Habargidir waxeey ka aamustay in Madaxweyne Xasan sameeystay shaqsiyaad aan beesha metelin balse ugu shaqeeya qaab maqaarsaara.
4-Beesha Habargidir waxeey ka xishootay iney ka dhiidhiso shaqo ka eryida lagu sameeyay dhamaan shaqsiyaadkii beesha Habargidir ugu jiray Dowladda dhexe .
5-Beesha Habargidir waxeey ka aamustay in Madaxweyne Xasan Taliyeyaashii Ciidanka Boliiska iyo Nabadsugida uu ka qaaday raggii haayay ee beesha u dhashay una magacaabay kuwa la qabiil hoose ah.
6-Beesha Habargidir oo arrimahaas oo dhan iska indha tireeysay waxeey maanta ka aamusi weeysay in cadaawada Madaxweynaha gaarto heer uu hub u diray Galgaduud si Beesha Habargidir dhexdeeda isu dagaasho.
7-Beesha Habargidir oo xushmad u heeyso beesha Abgaal Cismaan waxeey go-aansatay ineysan ka sii aamusnaan xukun maroorsiga iyo xaqiraada Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas darteed beesha waxeey walaalaha Abgaal Cismaan weeydiisanayaan iney cadeeyaan moowqifkooda xilalka laga qaaday dadka u dhashay beesha Habargidir iyo xilalka faraha badan ee lagu tixay dadka u dhashay beesha Abgaal iyagoo ku fadhiya kursiga Madaxweynaha?
8-Beesha Habargidir waxeey beesha Abgaal Cismaan weeydiisanayaan iney ka jawaabaan qadiyadda ay ka taagan yihiin cadaawada uu cadeeystay Madaxweyne Xasan ee ku qasabtay inuu Galgaduud u diro hub si beesha isu dhameeyso.
9- Beesha Habargidir waxeey tixgelin weyn u heeysaa isku xirnaanta iyo wada dhalashada beelaha ku abtirsada beelweynta Hawiye hasse yeeshee marnaba ma aqbali karto in Maareeyeyaashii Dekadda iyo Garoonka Muqdisho,Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho,Taliyeyaashii Boliiska iyo Nisa ,qandaraasyadii Turkiga iyo Amisom dhamaantood madax looga dhigo beesha Madaxweynaha ka dhashay ee Abgaal Cismaan.
10-Beesha Habargidir waxeey ku baaqeeysaa in la joojiyo colaadda Galgaduud ,waxeeyna hoosta ka xaqiijineysaa iney kalsoonidii kala laabteen shaqsiyaadkii weeraray Degmadda Guriceel kuwaas oo loo baahan yahay in Cadaaladda la horgeeyo sida dhaqanka beesha yahay maadama ay geeysteen dilal iyo barakicin.
11- Beesha Habargidir waxeey hoosta xariiqeeysaa in Shirka maamul dhisida goboladda dhexe lagu qabto Degmadda Cadaado iyadoo aysan jirin wax khilaafa .
12-Beesha Habargidir waxeey go-aansatay ineysan la sii shaqeeyn ama taageero siin Madaxweyne Xasan Sheekh hasse yeeshee waxeey beesha ka warsugi doontaa go-aanka beesha Abgaal Cismaan iyo jawaabta ay ka bixiyaan tabashooyinka iyo cabashooyinka beelweynta Habargidir.
13-Beesha Habargidir waxeey xaq u leedahay iney difaacato xaquuqdooda iyo saamigooda beelnimo sidaas darteed go-aankeena kama turjumayo xumaan iyo colaad abuuris u dhaxeeysa Beelaha Abgaal iyo Habargidir laakiin waxaanu qaadi doonaa tilaabooyin aan uga hortageeyno xaqiraada iyo damaca guracan ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud
Warsaxaafadeedkaan waxaa si wadajira u soo saaray
Hogaanka dhaqanka Beelweynta Habargidir ?
Hogaanka dhalinyarta Beelweynta Habargidir
Hogaanka qurbajoogta Beelweynta Habargidir
Hogaanka Haweenka Beelweynta Habargidir
yaysan kuqaadin daatka abgaal doqon yahoow caloosha weyndamerka ah.
Haba)rg)idi)reey noo cadeeya sababta Cee)yd)iid hubka nagu xasuuqaayay??guryaha aad heeysataan?dilkii Calasoow dheere raga ka danbeeyay oo la soo qabqabta..candhuufta laqa oo naga aamusa
MASHAQADA IYO MUSIIBADA KU HABSATAY UMADA SOMAALIYA INTOODA BADAN MAGAC AA LOO BIXI KARA “HG”. HG HA LAGA ILAALIYO WASAARADAHA: AMNIIGA GARANKA, GUDAHA, MALIYADA, GASHANDHIGA, QEEYRADKA DALKA
abgaal yuu lahadlaa, habargidir Gogol bay 40 isaga dileysaa, habargidirtan mideysan oo abgaal uu lahadlo bal natus, marka iska celi, marna, wax kaceli, marna kala celi xaalad ah baadba kujirtaane
Abgaal waa ineey hurdada kakacaan oo iska dhiciyaa hg magaaladoodana kaxureestaan iljeex iskadhicis ayeey wax kuleedahay
hadii aad Habar gidir wax u sheegetey shirka dib u heshiin siintana lagu qabtey
AbdulRaheem Garuun says:
Dhamaan maamulka iyo maaliyada gobolka Banaadir waxaa iska leh dadka Muqdisho dagan, Xitaa dagaal looga qaadi waa. Dhulkooda iyagaa difaacaya, xitaa Xasan Sheekh ayaan cid kale siin karin.
habardugag xaqi 25 umada xolahooda ay ku dhecen ba haysta dhexdo waxba qabsan waye siyasda somalina ka hare (ama afef hore lahow ama adkaysiyo danbe)
Soomaali hadalkaas ah HG “marna waa iska celi mana marna kala celi marna ka celi” iyo “Hg waa necbahay ninkii neceb ayaan ka sii necbahay” waxa iyo AUN Sandhool Guure.
Marka aad isticmaaleysid waa in aad xustaa haddii kale waxa aad noo tuseysaa in ay adiga kaa timid!
Reer Hiiraana waxa ay diideen in ciidankooda lagu amro in ay HG weeraraan oo dagaalka sii huriyaan “Alow Qabooji oo cadawga ha jibin HG”
Wiil Mataan Cabdule says:
Habargidir maanta maalintii aarteyda waaye adkeyso. HASE IILA SOO HAREED XUMAAN , HIRAAB AAN AHAY.
Cudurka Somali hayaa waa Habargidir.
Afar in Somaliya la ciribtiro mahee , ma xaaj ma tooseyso. Cudur, gaajo, jaahilnimo iyo Habargid oo loo hormariyo in dalka laga sifeyo.
Wiil Surre Dir Koofur says:
Habar gidir waa walaalkiin, Fartaada xumi, filiq filiq kaa gama go’do. Habargidir waa walaalkiin.
Wiil sure dir konfur HG waa kugu Xawaadle kugu soo direy hubka usoo dhiibay ee lagugu laayey KAMXANLEEY
Dalka waa federal ABGAAL deegaankiisa inuu maamulo xaq buu u leeyahay, FEDERAL HA GUULEYSTO
Run sheeg waa Ceebsheeg says:
waan ka xumaahay Habar gidir kursi doon way ku soo dhamaaden yar iyi weynba Caydiid ha u horeeyeee Abgaal baase dhaxak u hely war saldanada xoog maahee waa aqoon